Lubnaan oo gebi ahaanba koronto la'aana iyo waxa sababay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Lubnaan oo gebi ahaanba koronto la’aana iyo waxa sababay
Wadanka Lubnaan oo ay ku noolyihiin 6 milyan oo qof ayaa gebi ahaanba bilaa koronto maanta oo Sabtiya kadib markii laba warshadood oo korontada laga dhaliyo ay istaageen shidaal la’aan. ”Waxa lagu jirayaa dhowr maalmood ayuu yiri masuul u hadlay dawlada.
Haddaba maxaa sababay in dal dalxiiska ku fiicnaa ay mashaqooyin is xig-xigaa qabsadaan.
”Dalka waxa qasaya Sacuudiga oo markuu doonana shidaal u keena markuu doonana waxba keenin ayuu yiri masuul qariyay magaciisa oo u hadlay dawlada. Waxa iyana dhinaca kale ku jira dawlada Marayanka oo dagaal kula jirta ururka Xisbullah oo hadda ah dawlada keliya ee shaqaynaysa Lubnaan,
”Waxaan isku dayaynaa inaan isticmaalo shidaalka ciidanka laakiin wax degdega maaha wuxuuna masuulkan u hadlay dawlada sheegay inayna jirin lacag lagu soo iibsado shidaal. Wuxuu kaloo sheegay in maraakiib shidaal waday ay diideen inay dekedda ku soo xirtaan haddii saliida lagu iibsan doolar cadaana.
Iiraan ayaa u sheegtay dawlada Lubnaan inay u dhisi karto laba warshadood oo korontada laga dhaliyo laguna dhisayo muddo laba bilood ah waxase welli aan codsigaa aan qaadan dawlada Lubnaan oo iyada lafteeda lagu dhisay rafaad.
Haddaba dadka caadiga ah maxay leeyihiin.
Dadka caadiga ah ayaa qaba in mushkilada ugu weyni ay tahay laaluushka iyo musuqa ka jira dawlada dhexdeeda taas oo ragaadisay hawl maalmeedka dalka.
”Marka dalku bilaa dawlad yahay muddo 1 sanno ah maxaad ka filan kartaa, marku dhashana aanu waarayn muddo kooban. Korontada la’aanta hadda oo ay keentay shidaal la’aan waa shay laga hortagi lahaa haddii ay jirto madax fikiraysa.